DAAWO: Maxay Ahaayeen Erayadii Uu Tababaraha Xulka Qaranka Brazil Ee Tite Ka Oohiyay Neymar Jr? – WWW.Gool24.net
DAAWO: Maxay Ahaayeen Erayadii Uu Tababaraha Xulka Qaranka Brazil Ee Tite Ka Oohiyay Neymar Jr?
Xidiga xulka qaranka Brazil iyo kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa sidii aanu hore idiinku soo gudbinay si faah faahsan uga hadlay in saxaafada dalka France ay isaga ku abuurto cadaadis badan isla markaana ay sameeyeen warar been abuur ah wuxuuna kala cadeeyay warar badan oo ay saxaafada France aduunka kale u gudbisay oo sheegayay in aanu ku faraxsanayn kooxda PSG isla markaana uu dhibaato ka abuuro qolka labiska PSG.
Laakiin Neymar Jr ayaa ku dhex ooyay shir jaraa’id oo uu la qabanayay macalinka qarankiisa Brazil ee Tite kadib kulankii ay Japan guusha ka gaadheen iyada oo tababare Tite uu si cajiib ah u difaacay xidiga qarankiisa taas keentay in Neymar uu ilmada haysan kari waayo isla markaana uu shirka jaraa’id iskaga baxay markii uu macalinkiisa u sheegay in uu baxo.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa erayadii uu macalinka Brazil ee Tite uu ku difaacanay Neymar Jr ee xidiga PSG oohinta ka keenay sida aad muuqaalka sare ka arki karto.
Ugu horayn Tite ayaa hadalkiisa ku bilaabay: “Haddii aad ii ogolaataan waxaan doonayaa in aan ka hadlo Neymar.Anagu waxaanu soo wada shaqaynay sanad iyo badh, waxaanan ka daalay in aan maqlo in Tite uu dhibato ku qabo Neymar, sababtoo ah saamaynta iyo dabeecada wayn ee uu ku leeyahay qolka labiska”.
Tite oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Ma nihin kuwo dhamaystiran, waxaynu nahay bini’aadam, mararka qaar si qalad ah ayaad u falcelin karaa, aniga ayay igu soo dhacday intii aan ku jiray waayahayga ciyaareed, qalad miyaa?, qalad miyaa?. Waxaa jira tiro duruufa ah oo ay tahay in xisaabta lagu darsado isla markaana taxadar laga muujiyo in wax guud laga dhigo”.
Intaa kadib tababaraha Brazil ee Tite ayaa si toos ah uga hadlay Neymar wuxuuna yidhi: ” Waxaynu ka hadlaynaa dabeecada, dabiicinimada qalbiga fiican ee uu Neymar leeyahay” laakiin halkaas markii uu marayay Tite ayuu Neymar oohinta xejisan kari waayay wuuna baxay.
Ka hor intii aanu Neymar xaalad galin waxa uu hore uga hadlay xaaladiisa PSG wuxuuna yidhi: “”Anigu waan fiicanahay, faraxsanahay, dhiirogashanahay isla makraana qanacsanahay. Anigu waxaan ahay ciyaartoy boqolkiiba boqol ku bixiya garoonka dushiisa”.
Neymar oo beeninaya wararkii laga qoray ayaa yidhi: “Wax walba oo aniga la iga sheegay, aniga ayay iga cadhaysiinayaan sababtoo ah dadku waxay abuurayaan sheekooyin aan run ahayn. Anigu wax dhibaato ah kuma qabo Cavani, anigu dhibaato kuma qabo tababaraha isla markaana waxaan PSG ku imid taageeristiisa”.
Ugu danbayn Neymar ayaa hadalkiisa ku soo xidhay: “Anigu waxaan ahay qof jecel in uu guulaysto, waxaan jecelahay ku guulaysiga koobabka taasina waa sababta aan PSG u imid. Anigu waan faraxsanahay, waan faraxsanaa markii aan Barcelona joogay, isla markaana hadda waan faraxsanahay”.